खर्वाङमा २२ केजी १ सय ग्राम लागु पदार्थ चरेस बरामद, एक जना अभियुक्त पक्राउ एकजना फरार ! – ebaglung.com
खर्वाङमा २२ केजी १ सय ग्राम लागु पदार्थ चरेस बरामद, एक जना अभियुक्त पक्राउ एकजना फरार !
२०७४ कार्तिक १३, सोमबार १९:२४	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
कमल पौडेल, खर्वाङ २०७४ कात्तिक १३ । बडीगाड गाउपालिकाको खर्वाङ प्रहरी चौकीले एक जनालाई ठुलो मात्रामा लागु औषध चरेस सहित पक्राउ गरेको छ । निज संग रहेको अर्को व्यक्ति फरार रहेको प्रहरीले बतायो । निज अभियुक्तलाई हिँजो साँझ साढे ६ बजेको समयमा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बडीगाड गाउपालिका-२ खर्वाङ देखी नजिकै रहेको हाँडी खोलामा झोला बोकेका दुईजना व्यक्तिलाई शंकाष्पद अवस्थामा देखेपछी प्रहरी हवल्दार टकबहादुर प्रजाको नेतृत्वमा गस्तीमा रहेको खर्वाङ प्रहरीको टोलीले निजहरुको पिछा गर्दा उनिहरु हतार हतार दरम खोलाका पुल तरेर पारी मुसिकोट नगरपालिका ७ न्वाँर स्थित गंगा होटलमा पसेपछी उनिहरुलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा एक जना भागेको र अर्को एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा गल्कोट नगरपालिका वडा नम्बर १० पाण्डवखानी काप्रे घर बताउने ४६ बर्षिय धन बहादुर बुढा रहेको प्रह प्रजाले बताए ।
अभियुक्तहरुले बोकेको झोलामा अबैध लागु औषध चरेस २२ केजी १ सय ग्राम भन्दा बढी रहेको प्रहरीले ईबागलुङलाई बतायो ।
नियन्त्रणमा लिईएका एक जनाले आफनो नाम धनबहादुर बुढा बताएको र अर्को टेकबहादुर बुढा भएको जानकारी दिएको तर निज अभियुक्त बुढाले कुरा फेरिरहने गरेको पनि प्रहरी हवल्दार प्रजाले बताए ।
हामीहरुलाई कुनै एक व्यक्तिले ५ हजार रुपयाँ दिन्छु यो वामी टक्सार सम्म लगिदेउ भनेर पठाएको बताएपनि त्यस व्यक्तिलाई आफुले नचिनेको नियन्त्रणमा रहेका बुढाले बताएको प्रहरी श्रोत भन्छ ।
नियन्त्रणमा लिईएका बुढा र बरामद गरिएको चरेस सहित आाईतवार रातिनै ईलाका प्रहरी कार्यालय हरिचौरबाट प्रनि अर्जुनध्वज अधिकारीको कमाण्डमा आएको प्रहरी टोलीले हरिचौर लगेको थियो । आज दिउँसो पनि प्रनि अधिकारीको टोली खर्बाङ आएर घटनास्थल अबलोकलन गरेर गएको छ ।
ईलाका प्रहरी हरिचौरका प्रनि अधिकारीले ईबागलुङसंग कुरा गर्दै अभियुक्त र बरामद चरेस सहित थप कार्बाहीको लागि मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा पठाईने जानकारी दिए ।
बागलुङमा चुनावी तयारी तीब्र, उम्मेदवारको सुरक्षमा प्रशासन गम्भीर !
अपडेट : गुल्मी बिरवास माईक्रोबस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १० पुग्यो, ७ जना घाईते !